2018 Jeep Wrangler Jiro jiro LED, Jeep Jiro jiro naterak'i jambon
9 santimetatra Jeep Wrangler Jiro jiro: volavola manokana mety Jeep Wrangler JL 2018 2019, fanoloana tonga lafatra ho an'ny Jeep Jiro jiro am-boalohany, tsy ilaina ny fononteny.
Koa satria Jeep Wrangler JL 2018-up dia mampiasa jiro 9 santimetatra, izahay no nanamboatra endrika vaovao indrindra nitondra jiro jiro ho an'ny Jeep Wrangler JL 2018+. Ity maodely MS-GX9 ity dia jiro mitondra 9 mirefy, tsy mitovy amin'ny hazavana tariby mitondra 7 hafa, azo apetraka Jeep Wrangler JL 2018+ tsy misy mout bracket, lalao mety Jeep ho an'ny JL 2018+. Izy io dia miaraka amin'ny andry avo 100w 6500lm, andry ambany 30w 3000lm misy DRL 22w, mari-pana loko fotsy voajanahary, neken'ny DOT SAE, azo antoka eny an-dalana. Maherin'ny 50000 ora mandritra ny androm-piainany maharitra 12 volana, fivarotana mafana no mitarika jiro ho an'ny Jeep Wrangler JL 2018 2019. Izahay dia Jeep Wrangler namboarina jiro mpanamboatra any Shina, manao orinasa manerantany izahay, tongasoa ny manontany.
Ity ambany ity ny vidoe an'ny Morsun 2018+ Jeep Wrangler jl nitondra tutorial sy famerenana jiro jiro.
Famaritana ny 9 santimetatra Jeep Jiro nitarihana jiro
Halo Headlight ho an'ny taona 2018 Jeep Wrangler JL
MS-GX9 amin'ny SEMA 2019
Endri-javatra ny 9 santimetatra Jeep Wrangler Jiro jiro LED LED
Lamina tsara be.
Fanitsiana ambony / midina.
Fa Jeep Wrangler JL 2018+
2019 Jeep Wrangler Fanatanjahan-tena 2-varavarana
2019 Jeep Wrangler Fanatanjahan-tena 4-varavarana
2019 Jeep Wrangler Sahara 4-varavarana
2018 Jeep Wrangler Fanatanjahan-tena 2-varavarana
2018 Jeep Wrangler Fanatanjahan-tena 4-varavarana
2018 Jeep Wrangler Sahara 4-varavarana